Home News Misaaniyadda Wasaaradda Amniga waa $152 kun bishii? Yaa isticmaala?
Misaaniyadda Wasaaradda Amniga waa $152 kun bishii? Yaa isticmaala?
Miisanayadda Wasaaradda Amniga ee sida rasmiga loo diiwaan galiyay ayaa ah $152,000 (boqol, konton iyo labo kun) bishii, taas oo sanadkii ka dhigaysa 1.8 Milyan Doolar. Lacagtaas kuma jirto lacagaha loo istcimaalo mushaarka ciidanka iyo wixii la mida, laakin waa lacagta la sheego in lagu qabto howl malmeedka Wasaaradda.
Su’aasha u baahan in la is waydiiyo ayaa ah; hadii aan mushaar ciidan lagu bixin ama shaq toos u qusaysa Amniga aan lagu bixin, maxa lagu bixiyaa qarashkaas? Ra’isal Wasaare Kheyre iyo Wasiir Ducaale ayaa heshiis ku ah in lacagtaas loo istcimaalo dano gaar ah iyo in lagu shubo koonto u qaasa. Xiriirka ka dhaxeeya labadaan nin ayaan ahayn mid shaqo oo kali ah balse waa mid ku salaysan in la dhaco hantida umadda Soomaaliyeed. Ma jirto cid la xisaabtanto ama hay’ad daba gasho musaqa lagu sameeynayo hantida qaranka. Hanti dhowrkii Qaranka, Maxamed Afgooye waa wiil uu Kheyre ka keensaday Maraykanka oo hamigiisu yahay in uu helo mushaar iyo dhaqaale uu ku bixiyo deynta gurigiisa ku yaalo Virginia ee dalka Maraykanka.
Si aan arantaan wax uga ogaano ayaan waxaan isku daynay in aan la xiriirno wasiir Ducaale, laakiin waxa uu diiday in uu artintaan ka hadlo. Afhayeenkii hore ee Wasaaradda Amniga Cabdicasis Xildhibaan ayaa sheegay in wasaaradda Animiga noqotay waxa afka qalaad lagu yiraahdo “Slush Funds” oo lagu fuliyo dano gaar ah.
Previous articleKooxda Shabaab oo qorsheeynaya weeraro toos ah oo ay ka geeystaan magaalada Muqdisho
Next articleKooxo Hubeysan ayaa Suuqa Bakaaraha Ku dilay Masuul katirsan Degmada Howlwadaag
(Deg Deg) Dowladda Federaalka oo taageertay go’aankii xilka qaadista Guddoomiyaha Barlamaanka...